ဘယ်အချိန်မှာလက်လျှော့လိုက်မလဲ | MyanmarJobsDB
When is it too early to quit? ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေကို internet မှာဘယ်စာမျက်နှာမှာပဲမေးမေး ပြန်ရတဲ့အဖြေကတော့ “ဘယ်အချိန်အလုပ်ထွက်ထွက် အချိန်ကအမြဲစောလွန်းပါသေးတယ်။” လို့အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြားမှာရှိတဲ့ ဘ၀မှာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့ရသမျှကို ကြိုးစားတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ကျဆုံးခြင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပိုင်းခြားပေးထားတာပါ။
ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ရဦးမှာပဲ၊ ဒါတွေက သင့်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ဦးဆောင်ပေးတယ်။ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ ဒါမှသင့်မှာ အတွေ့အကြုံအသစ်၊ အတတ်ပညာအသစ်တွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်တွေတိုးလာ နိုင်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပေါ်မှီခိုအားထားနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ တွေခွဲဝေပေးနိုင်မယ်။ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ လမ်းစသစ်တွေဖြစ်လာမယ်။
ကျော်ကြားတဲ့ Winston Churchil ရဲ့ပြောစကားအရ “ငရဲကို ဖြတ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဆက်ပြီး သွားပါ။”သူ့ အတွက်ကတော့ ဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ရပ်နေလိုက်လျှင် တခြားတစ်ဖက်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သူဘာမှမသိ မမြင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာ ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ခုခုလုပ်လိုက်နိုင်လောက်မယ့် ရလာဒ်ကို ဘယ်တော့မှသိလိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ သူ့အနေနဲ့ခံယူထားပါတယ်။
အများအားဖြင့် ကျဆုံးမှုတွေဖြစ်မလာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်ကနေ တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးတတ် ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အခက်အခဲမျိုးစုံ ကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အလုပ်ကို လက်လျှော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ခံစားချက်ထက် ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်ထုတ်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ကြရတတ်တယ်။
စာရေးဆရာ Les Brown ကတော့ “သင်အနိုင်မရမချင်း ဘယ်တော့မှ ပွဲမပြီးဘူး” အဲဒီလို အောင်နိုင်မှုကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဖြစ်ခြင်း ကမှ ဘ၀ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ မကောင်းပြောတဲ့သူတွေ၊ မမှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ သူ့ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ နောက်ပြီး တချို့သူတွေက အဆိုးမြင်တတ်ကြတယ်။ ဘာကိစ္စ မဆိုYes ဆိုတဲ့ အဖြေမပေးခင်၊ No ကို (၇)ခါ၊(၈)ခါ လောက်ကိုပြောဆို ငြင်းတတ်ကြတဲ့ သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
Success ဆိုသည့် အောင်မြင်မှု ဟာ အလုပ်အကိုင် ဆိုတဲ့ Work ရဲ့ အရှေ့မှာကြို ရောက်နိုင်သည့်နေရာသည် အဘိဓာန် စာအုပ်တစ်နေရာထဲမှာသာရှိပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ မအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ကွဲပြားခြားနားစေတဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ အလုပ်ကိုလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းပါ။
Quitting အလုပ်ထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ချက်၊ မိသားစုအရေုး၊ အာရုံ စူးစိုက်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ ဇွဲလုံလရှိမှု ဆိုတဲ့အုပ်စု နဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်တစ်ခုပါ။ ဇွဲလုံလ ၀ရိယ ရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ဘ၀ရဲ့ အခက်အခဲ အတက်အကျ ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအပေါ် ခွန်အား အပြည့်နဲ့ ကျော်လွှား ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။
အနာခံမှ အသာစံရမယ် ဆိုသလိုပါပဲ။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လောကဓံ ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ပြီး အောင်မြင်ခြင်းလမ်းစပြပေးဖို့ရောက်လာတာပါ။ တစ်ခုခုအခက်အခဲလေးတွေ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ ထွက်ဖို့ (quit) ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။
ဒါကြောင့်ဒီစာကြောင်းအတိုင်းပါပဲ “It is always too early to quit”.
By Yumi – Reference: Careerealism